ShweMinThar: ငါးမီးဖုတ် ခဝဲသီးဟင်းခါး - သီးစုံပဲအချဉ်ဟင်း (Sambar) -ကော်ရည်ဟင်းချို
ငါးမီးဖုတ် ခဝဲသီးဟင်းခါး - သီးစုံပဲအချဉ်ဟင်း (Sambar) -ကော်ရည်ဟင်းချို
ထမင်းသုပ်နဲ့ တွဲဖက်စားဖို့ ဟင်းခါးလေးတစ်မျိုး ပြင်ဆင်ချင်ရင်တော့ ငါးမီးဖုတ်နံ့ သင်းသင်းလေးပါတဲ့ ဟင်းခါးလေးချက်ဖို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ခဝဲသီးချိုချိုလေးကို ငရုတ်ကောင်း ပူပူလေးနဲ့ ဟင်းရည်လေး ချက်ပေးထား ပါတယ်။
• ငါးခူအကောင်သေး - ၁ ကောင်
• ခဝဲသီး - ၁ လုံး
• ဆီ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
• ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်
• ငံပြာရည် - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း
• နံနံပင်အမြစ် - ၂ ခု
• နံနံပင် - ၂ ပင်
• ငရုတ်ကောင်း - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
၁။ ငါးခူကို မီးသွေးမီးမှာ ခပ်ခွာခွာထားပြီး ဖုတ်ပေးပါ။ ဂက်စ်မီးဖြစ်ရင် ခဲပတ် ပတ်ပြီး ဖုတ်ပေးပါ။ လှည့်ပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ပေးပါ။ အအေးခံပြီး အသားနွှင် ထားပါ။
၂။ ငါးအရိုးများကို ဆား၊ ငံပြာရည်ထည့်ပြီး ရေနွေးဆူဆူ မှာ နံနံပင်အမြစ်များနဲ့အတူ ပြုတ်ပါ။ အရည်စစ်ပြီး ဖယ်ထားပါ။
၃။ လှီးထားသော ခဝဲသီးများကို ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆီတို့ ထည့်၍ အရည်ထွက်လာပြီး ပျော့သွားသည်အထိ လုံးတည်ထားပါ။ ငါးရိုးပြုတ်ထားသော အရည်များ ထည့် အသားနွှင်ထားသော ငါးများထည့်ပါ။ ကျန် ပါဝင်ပစ္စည်းများ ထည့်တည်ပြီး ဆူလာလျှင် အသုပ် နှင့် တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
အိန္ဒိယဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်တဲ့ သီးစုံပဲအချဉ် ဟင်းဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ မနက်ခင်းစာ တိုရှည်၊ ပူရီအစရှိသည်တို့ဖြင့်လည်း တွဲဖက်တည် ခင်းပြီး မြန်မာအများစုကတော့ ဟင်းအဖြစ်သာ တည် ခင်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ ချက်နည်းများ အနည်းငယ် ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ သက်သတ်လွတ်ချက်လိုပါက ချက်နိုင်ပါတယ်။
• ပဲစင်းငုံ/ကုလားပဲ - ၅ ကျပ်သား
• ခရမ်းချဉ်သီး - ၂ လုံး
• ချင်းကြက်သွန်ဖြူထောင်း - ၁ ဇွန်း
• အာလူး - ၂ လုံး
• ဗိုလ်စားပဲ - လက်တစ်ဆုပ်
• ခရမ်းသီး - ၁ လုံး (ကြီး)
• ရုံးပတီသီး - ၅ တောင့်
• ဒန့်ဒလွန်သီး - ၅ တောင့်
• မုန်လာဥ - ၁ လုံး
• ဘူးသီး - တစ်စိတ်
• ပုစွန်ခြောက်/အာပြဲခြောက် - လက်တစ်ဆုပ်
• ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက် - ၃ ခက်
• ငရုတ်သီးခြောက် - ၅ တောင့်
• ဆား - လိုသလောက်
• ငံပြာရည် - ၃ ဇွန်း
• ဟင်းခတ်မှုန့် - ၂ ဇွန်း
• မန်ကျည်းမှည့်အနှစ် - ၃ ဇွန်း
• မဆလာ - ၁ ဇွန်း
• အရောင်တင်မှုန့် - ၁ ဇွန်း
• နနွင်းမှုန့် - အနည်းငယ်
• နံနံပင် - လက်တစ်ဆုပ်
၁။ ပဲစင်းငုံ (သို့) ကုလားပဲကို ရေဆေးပြီး ရေစိမ်ထားပါ။ ပွလာပါက အိုးထဲထည့်ပြီး နူးသည်အထိ ပြုတ်ထားပါ။
၂။ ပါဝင်သော အသီးအနှံများအားလုံးကို ရေဆေးပြီး အရွယ်တူ လှီးဖြတ်ထားပါ။ အာလူး၊ ခရမ်းသီးကို ရေစိမ်ထားပါ။ ရုံးပတီသီးကို သီးသန့်ဖယ်ထားပါ။ ကြက်သွန်၊ ခရမ်းချဉ်သီး ပါးပါးလှီးထားပါ။
၃။ ချက်မည့်အိုးကို အပူပေးပြီး ဆီထည့်ပါ။ ဆီပူပါက ငရုတ်သီးခြောက် ထည့်ကြော်ပြီး ဖယ်ထားပါ။
၄။ ကြက်သွန်နီဆီသတ်ပါ။ ချင်းကြက်သွန်ဖြူထောင်းကို ထည့်၍ ဆီသတ်ရွက်ထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။ ပုစွန်ခြောက်၊ ငါးခြောက်ထည့်ပါ။ မွှေးလာပါက အရောင်တင်မှုန့်၊ နနွင်းမှုန့်ထည့်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးထည့်ပါ။ အနည်းငယ်ကြေ အောင် ခြေပေးပါ။
၅။ ခရမ်းချဉ်သီးကြေပါက လှီးဖြတ်ထားသော အသီးအနှံများ (ရုံးပတီသီးမှအပ)ကို ထည့်ပါ။
၆။ သီးနှံများအားလုံးကြော်မိပါက ပြုတ်ထားသော ပဲကို ခြေပြီး ရောထည့်ပါ။ ရေ လိုအပ်သလောက် ထပ်ထည့်ပြီး အရသာ ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်၊ ငံပြာရည်ထည့်ပြီး အဖုံးအုပ်ကာ သီးနှံများနူးသည်အထိ တည်ထားပါ။
၇။ သီးနှံနူးပါက မန်ကျည်းမှည့်အနှစ် ဖျော်ထည့်ပါ။ ရုံးပတီသီး၊ မဆလာနှင့် ကြော်ထားသော ငရုတ်သီးခြောက်တို့ကို ထည့်ပြီး ဆူပွက်အောင် တည်ပါ။ အရသာ အပေါ့အငန်မြည်းပြီး နံနံပင်အုပ်ကာ တည်ခင်းသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ဒီကော်ရည်ဟင်းချို ဟာဆိုရင်တော့ အရမ်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး ချက်ရတာလည်း မြန်ဆန်တယ်။ အရသာလည်း ရှိတဲ့ ဟင်းချိုပဲဖြစ်ပါတယ်။
♦ ကဏန်းသားချောင်း – ၆ ချောင်း
♦ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း – ၁ ပွင့် (250 gm)
♦ ကြက်သွန်ဖြူ –5gm
♦ ပဲငံပြာရည် (အကြည်) – စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
♦ ကြက်သားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
♦ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
♦ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁/၄ ဇွန်း
♦ နှမ်းဆီမွှေး – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁/၄ ဇွန်း (အနည်းငယ်)
♦ ဆီ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
♦ ရေ – 1 Liter
♦ ကော်မှုန့် – စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
၁။ စပြီး ပြင်ဆင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ ကဏန်းသားချောင်းများကို အကွင်းလိုက် ပါးပါးလှီးပါ။
၂။ ပြီးရင်တော့ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကိုတော့ ပရိသတ်တွေစိတ်ကြိုက် အပွင့်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပွင့်သေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လှီးလို့ရပါတယ်။
၃။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ကြက်သွန်ဖြူကို ဓားပြားရိုက်ပြီး ဒယ်အိုးထဲမှာ ဆီသတ်ပါ။ အနံ့မွှေးလာပြီဆိုရင်တော့ မီးပျော့ပျော့ဖြင့်သာ ကဏန်းသား ချောင်းများကို ဆီသတ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကို ထည့်ပါ။
၄။ အနံ့မွှေးလာပြီဆိုရင်တော့ ရေထည့်ပါ။ ပြီးရင် အရသာအတွက်ကို ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ဆား၊ သကြားတို့ကို ထည့်ပါ။
၅။ ရေဆူလာလို့ အနံ့မွှေးလာပြီဆိုရင်တော့ အရသာမြည်းပါ။ အရသာ အဆင်ပြေပြီဆိုရင်တော့ ကော်မှုန့်ကို အရည်ဖျော်ပြီး ထည့်ပေးပါ။ အရသာပိုကောင်းသွားစေချင်တဲ့အတွက် ငရုတ်ကောင်းနဲ့၊ နှမ်းဆီမွှေး ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကို အရသာရှိသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
၆။ ဒီဟင်းရည်ကို ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပရိသတ်များက ကြက်ဥအကာကို ထည့်ပြီး မွှေပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးကောင်းသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
♦ အံ့ဝင့်ထွဋ် ♦
Posted by Alex Aung at 5:14 AM
ပီကင်းဘဲကင် - တရုတ်ခေါက်ဆွဲကြော် - ကြက်ကင်နည်းစုံ
စီလီကွန်တောင်ကြား (Silicon Valley) နဲ့ Artificial ...
⚠️လျှပ်စစ်အသားပေါင်းအိုး အသုံးပြုမည့်သူများ သိထားရ...
ရွေးချယ်စရာ Video အတွက် Mirrorless Camera များ
တပ်မတော်ရမ်အရက် (Army RUM)
“Sex chat ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သမျှ”
မှိုခြောက်စပ်ကြော် - Dim Sum ကြက်ခြေထောက်ပေါင်း - ...
ကြွက်သားဘာ့ကြောင့် မတက်နိုင်ဖြစ်နေရသလဲ ???
မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့၏ မူဝါဒချမှတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် (စာ...
"မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုးကျဆင်းမှုအတွက် ဘာလုပ်သင့်သလဲ"...
လက်ဖက်စိုက် ပလောင်တောင်သူများရဲ့ ထိခိုက်နစ်နာမှုမျာ...
ဘယ်လိုလုပ်တာက ခန္ဓာကိုယ်အဆီကျဖို့ အထိရောက်ဆုံးလဲ ??...
"သွေးလေးဖက်နာ (Rheumatoid Arthritis)"
Army base stew (Budae-jjigae) - ပုစွန်ဆီထမင်း - အ...
"ပါကင်ဆန်ရောဂါ" (Parkinsonism Syndrome )
မုန့်လက်ကောက် နှစ်ပြန်ကြော် - ခေါက်မုန့် - ရေမုန့်...
အဖြူဆင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော သိကောင်းစရာများ(White...
ငါးမီးဖုတ် ခဝဲသီးဟင်းခါး - သီးစုံပဲအချဉ်ဟင်း (Samb...